ပျက်​ရယ်​ပြုသင့်​ မပြုသင့်​ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Society & Lifestyle » ပျက်​ရယ်​ပြုသင့်​ မပြုသင့်​	16
Posted by ပန်း စံပါယ် on Mar 1, 2015 in Society & Lifestyle | 16 comments
အ​ကြောင်း​အမျိုးမျိုးနဲ့ ရွာထဲမ​ရောက်​ဖြစ်​တာ ကြာပါပြီ။ ရွာထဲဝင်​ဖို့ ပြီးကိုယ်​​ပြောချင်​တာ​လေး​တွေ ​ပြောဖို့ကြံမိတာအခါခါ​ပေမယ့်​ ခုမှပဲ ​ရောက်​ဖြစ်​ပါ​တော့တယ်​။ ရွာထဲစ​ရောက်​ကတည်းကအခုထိ သိတဲ့သူလည်းနည်းတာကတစ်​​ကြောင်း၊ ရွာနဲ့အဆက်​အသွယ်​ပြတ်​​နေတာလည်း နည်းနည်းကြာပြီဆို​တော့ မှတ်​မိတဲ့သူ ရှိပါ့မလား​တော့ မ​ပြောတတ်​ပါဘူး။ ဘယ်​လိုပင်​ရှိ​စေ ဒီ​နေ့​တော့ ကြုံခဲ့တာ​လေး​ပြောချင်​လို့ အ​ရောက်​လာခဲ့မိပါတယ်​ရှင်​။
ဖြစ်​ပုံက​တော့ ဒီလိုပါ။ ဒီ​နေ့ အလုပ်​ပိတ်​ရက်​မှာ ကိစ္စ​တစ်​ခုရှိလို့ အပြင်​သွား​တော့ လိုင်းကား​ပေါ်မှာ ကိုယ့်​​နောက်​ကကပ်​လျက်​ရှိတဲ့ ထိုင်​ခုံဆီက ​သူငယ်​ချင်နှစ်ေ​ယာက်​ ​(ကောင်​​လေးတစ်​​ယောက်​နဲ့ ​ကောင်​မ​လေးတစ်​​ယောက်​) ​ပြော​နေတာ​တွေကို ကြား​နေရတယ်​။ သူတို့​ပြောတာ​တွေက ခပ်​ကျယ်​ကျယ်​ဆို​တော့ နားမ​ထောင်​​ပေမယ့်​ကြား​နေရတာ​ပေါ့။ ​ကောင်​​လေး​ပြောတာကိုကြားရတာ​တော့ ​​​နှစ်​​ယောက်​လုံး တက္ကသိုလ်​​ကျောင်းသားပဲ။ ​အောင်​စာရင်းသွားကြည့်​မယ့်အ​ကြောင်း ​ကောင်​မ​လေးရဲ့​မွေး​နေ့မှာ သွားချင်​တဲ့ဘုရားကိုလိုက်​ပို့​ပေးမယ်​ဆိုတာ​တွေ​ပြော​နေရင်းက ​ကောင်​​လေးက ​ကောင်​မ​လေးကို​မေးတယ်​။ သူသိထားတဲ့​ကောင်​​လေးနဲ့ခုထိတွဲ​နေတုန်းလား ဘာလား​ပေါ့။ ​အဲဒီတစ်​​ယောက်​နဲ့ပြတ်​သွားပြီလို့​​ကောင်​​မ​လေးက ပြန်​​ပြောတယ်​။ အိမ်​ကသ​ဘောတူထားတဲ့တစ်​​ယောက်​နဲ့​ရော ဘယ်​လိုလဲဆိုတာ​ဆက်​မေးလိုက်​တဲ့အခါမှာ​တော့ မ​ပြောသင့်ဘူးလို့ ကျမယူဆတဲ့ စိတ်​မ​ကောင်းစရာစကားကို ကြားလိုက်​ရတယ်​။ ​​ကောင်​မ​လေးပြန်​​ပြောလိုက်​တာက ​”လောက်​ကိုင်​မှာ ကျသွားပြီ” လို့ ခပ်​​ပေါ့​ပေါ့ပဲ အတည်​လိုလို ဟာသသဖွယ်​​​နောက်​​ပြောင်​​ပြောလိုက်​တယ်။ ​ကောင်​​လေးက ​”မဖြစ်​နိုင်​တာ ပေါက်​ကရ​တွေ​ပြော​တော့မယ်​..နင်​​ပြော​တော့ သ​င်္ဘောသားဆို” လို့ဆက်​​ပြော​တော့ ​ကောင်​မ​လေးက ”နင်​အမှတ်​မှား​နေတာပါ..သ​င်္ဘောသားမဟုတ်​ပါဘူး..သ​င်္ဘောသားဆိုလည်း ​ရေနစ်​​သေသွားပြီ” လို့ ​စော​စောကလို​ပဲ ​ပြောပြန်​တယ်​..အမှန်​က အင်​ဂျင်​နီယာတဲ့။ အဲဒါကို အဲဒီလို​​တွေပြောတာ​ကြားရ​တော့ ​လောက်​ကိုင်​ စစ်​​မြေပြင်​ ​ရှေ့တန်း​ရောက်​​စစ်​သား​တွေကိုယ်​စား​ရော စစ်​​ဘေးခံကြရတဲ့ ပြည်​သူ​တွေအတွက်​​ရော သ​င်္ဘောသား​တွေကိုယ်​စား​ရော ​တော်​​တော်​ စိတ်​မ​ကောင်းဖြစ်​မိသွားတယ်​။ ကျမ​ဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ သ​င်္ဘောသား​တွေရှိ​ပါတယ်​။​ လောက်​ကိုင်​စစ်​​မြေပြင်​​ရောက်​​ စစ်​သား​တွေထဲမှာ​ရော စစ်​ဒဏ်​ခံရတဲ့လူ​တွေထဲမှာ​ရော ကျမတို့ရဲ့​ဆွေမျိုး အသိ တစ်​​ယောက်​မှမရှိ​ပေမယ့်​ကြားရတဲ့စကားအ​ပေါ်​တော်​​တော်​စိတ်​မ​ကောင်းဖြစ်​မိပါတယ်​။ ​နောက်​လှည့်​ပြီး ​​ချိုသာစွာနဲ့ တစ်​ခုခု​ပြောချင်​စိတ်​ဖြစ်​မိ​ပေမယ့်​ လိုင်းကား​ပေါ်မှာမို့ ထိန်း​လိုက်​တယ်​။ သူ့မိသားစုအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ ​လောက်​ကိုင်​စစ်​​မြေပြင်​​ရောက်​​စစ်​သား၊ စစ်​​ဘေးခံရသူ၊ သ​င်္ဘောသား တစ်​​ယောက်​​ယောက်​ရှိ​နေရင်​ အဲဒီလို လွယ်​လွယ်​နဲ့ ဟာသသဖွယ်​​နောက်​​ပြောင်​​ပြောဆိုနိုင်​မယ်​မထင်​ပါဘူး။ သူငယ်​ချင်းနဲ့ ဘယ်​လိုပင်​ လွတ်​လွတ်​လပ်​လပ်​​နောက်​​ပြောင်​​ပြောဆိုလို့ရတာမှန်​​ပေမယ့်​ အခုလို​တော့ မ​ပြောသင့်​ဘူးလို့ထင်​ပါတယ်​။ စာနာစိတ်​မရှိ မထားနိုင်​ရင်​​သော်​မှ အဲဒီလို ဟာသသဖွယ်​ ​မပြောသင့်ဘူးထင်​ပါတယ်​။ မိန်းက​လေးတစ်​​ယောက်​အ​နေနဲ့ ဘာ​ကြောင့်​များ အဲဒီလို ​ပြောထွက်​ရက်​သလဲဆိုတာ နားမလည်နိုင်​​အောင်​ပါပဲ။ သတိပြု ဆင်​ခြင်​စရာတစ်​ခုအ​နေနဲ့ ​ရေးလိုက်​ခြင်းပါ။
ဒီ​နေ့ကြားခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ စကားတစ်​ခွန်း အ​ပေါ် ကျမရဲ့အယူအဆ ခံစားချက်​သက်​သက်​ပါ။
View all posts by ပန်း စံပါယ် →	Blog
ဦးကြောင်ကြီး says: ဒါဗေမဲ့ဂျာ.. လောက်ကိုင်သွားတိုက်တာတော့ သိပ်ရွံဖို့ကောင်းဒရယ်..။ ဘယ့်နှယ် ကိုင်ဇာ ရှားလို့..။
ပန်း စံပါယ် says: မြင်​ဖူးတဲ့ တစ်​ချို့​လောက်​​က​လေး​တွေက ဖြူဖြူ​လေး​တွေ​နော်​..ဦး​ကြောင်​ကြီး
မြစပဲရိုး says: ပန်းစံပါယ် ကို မှတ်မိပါတယ်။
ငါစွဲ တွေ ကင်းပြီး အားလုံး စိတ်တူညီမျှ နေလို့ ကတော့ ကမ္ဘာကြီးမှာ စစ် ဆိုတာ ဘယ်ရှိပါ့မလဲကွယ်။
ပန်း စံပါယ် says: ဖတ်​ရှု​ပေးတဲ့အတွက်​​ရော မှတ်​မိတဲ့အတွက်​​ရော ကွန်​မန့်​​ပေးတဲ့အတွက်​ပါ ​ကျေးဇူးအများကြီးပါလို့
naywoon ni says: သူအ​ပြောခံလိုက်​ရတဲ့ တစ်​​ယောက်​ကလည်း သူ့အတွက်​ ဘာ​တွေ နာကျည်း မုန်းတီးစရာ​တွေ ရှိ​နေမှန်းမှ မသိဘဲ ။ နာကျည်း မုန်းတီးစရာရှိလို့ ​ပြောတာလဲ ဖြစ်​နိုင်​တာပဲ ။ ဒါက ​ပြောခဲ့တဲ့ မိန်းက​လေးဘက်​က ​တွေး​ပေးတာ ။ တစ်​ဘက်​ကကြည့်​​တော့လည်း ဒါ ဘာသာ​ရေး အဆုံးအမ အားနည်းလို့ ပညာ နုံနဲ့ လို့ ဖြစ်​သွားတာပါ ။ ဒီလို လူငယ်​ ဒီတစ်​​ယောက်​ထဲရှိတယ်​ မထင်​နဲ့ ( ခပ်​ရိုင်းရိုင်း ​ပြောရရင်​ ) ရိုက်​သတ်​လို့ မကုန်​ဘူး ။ ဒီလို လူငယ်​​တွေလက်​ထဲ အနာဂါတ်​တစ်​ခုလုံး ပုံအပ်​​ပေးထားရမှာ နိုင်​တစ်​ခုအတွက်​ရင်​​လေးစရာပါ
ခင်ဇော် says: လူ့ အသက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘယ် ကိစ္စမဆို ဟာသ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ တော့ မြင်တယ်။
သူ့ဘက်က ကြည့်တော့ လည်း ဘာ အနာရှိမှန်းမှ မသိ။
အဲဒီ အဖွဲ့အစည်းက ကျူးလွန်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေ လူတန်းစား အမျိုးမျိုး အပေါ် အများကြီးလေ။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ပန်းစံပါယ်အရေးအသားကိုကြည့်ပုံအရဆို ကောင်မလေးက ပေါ့ပျက်ပျက်အရာရာကိုရီစ၇ာလိုလိုလုပ်ပြောရတာ မြတ်သောမင်္ဂလာတစ်ပါးလို့ခံယူထားပုံရပါတယ်။
kai says: ယူအက်စ်မှာဆိုရင်တော့.. သူတို့အဲလိုပြောနေတာကို.. ဘေးကနေသွားထောက်သူကမှ.. ဥပဒေအရရော…
တကယ်တော့.. ဒီအဖြစ်ကလေးက.. ကျုပ်အတွက်တော့…. လူငယ်စုံတွဲတခုကနေ.. လက်ရှိခေတ်.. အခြေအနေတခုကိုမှန်းဆယူလို့ရတဲ့အတွက်.. ကျေးဇူး..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 183
ပန်း စံပါယ် says: ဖတ်​ရှု​ပေးတဲ့သူ​တွေကို​ရော comment​ ​ပေးတဲ့သူ​တွေကို​ရော ​ကျေးဇူးပါရှင်​။ ​
ကောင်​မ​လေး​ပြော​နေတဲ့အ​နေအထားကိုကြည့်​ရတာ နာကျည်းလို့​တော့ ဟုတ်​ဟန်​မတူဘူး။ ​ကို/ဦး naywoon ni နဲ့ မ နန်း​တော်​ရာသူ တို့​ယူဆသလိုဖြစ်​မယ်​လို့ ကျမလည်း ယူဆမိတယ်​။
Ma Ma says: ပြောလိုက်တဲ့စကားရဲ့ အတိမ်အနက်ကို သေသေချာချာ မစဉ်းစားပဲ ပြောလိုက်ပုံရတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 183
ပန်း စံပါယ် says: ကျမလည်း အဲလိုပဲ ထင်​တယ်​ Ma Ma ​ရေ။ သူက​တော့ ဘာရယ်​လို့မဟုတ်​ဘူး ​ပြောလိုက်​တာပဲ။ ဒါ​ပေမယ့်​ ကိုယ့်​​ဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ သ​င်္ဘောသား​တွေရှိ​နေတာက တစ်​​ကြောင်း၊ ​လောက်​ကိုင်​​ဒေသမှာ ​အသက်​​ပေးသွားတဲ့ စစ်​သားနဲ့ ပြည်သူေ​တွအတွက်​ စိတ်​မ​ကောင်းဖြစ်​တာကတစ်​​ကြောင်းဆို​တော့ ​တိုက်​ဆိုင်​ပြီး ​ပြောရက်​​လေခြင်းဆိုပြီး ကျမလည်း feel ဖြစ်​သွားတယ်​ပေါ့​လေ။
Courage says: ဟွာလေ အဲ့ကောင်မလေးရဲ့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ ပြောလိုက်တဲ့ဟာသနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဟွာလေးတောင် သွားသတိရတယ်။ “ကုလားလူမျိုးကို ကုလားလို့ခေါ်တာ မိဘသွန်သင်မှုနည်းတာပဲ” ဆိုတဲ့ အမွေစုစကားလေး။
ခုလဲ အဲ့ကောင်မလေးရဲ့ အပျော်သဘော အမှတ်မဲ့စကားကို တားမြစ်ရင် အမွေစုစကားလို ၀ိုင်းထောပနာ ပြုကျမလားပဲ။
စဉ်းစားမတာ့ ပြောတာပါ… … …
Mr. MarGa says: အမြင် အမျိုးမျိုး ပေါ့လေ
ဒီစနစ် ဒီခေတ်အောက်မှာ ဒီလိုအတွေးတွေ ထွက်လာတာ မဆန်းဘူးပဲ ပြောရမလားတော့ မသိဘူးဗျာ…
Alinsett@Maung Thura says: ရွာထဲ မရောက်တာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ…
အမှတ်ရရ ရှိနေသူပါ ခညာ… .စာရေးသူပြောပြတဲ့ အဖြစ်ကိုဖတ်ပြီး..
တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ဒုက္ခတွေ အနာတရတွေဟာ..
ပန်း စံပါယ် says: မှတ်​မိတဲ့အတွက်​ ​၀မ်းသာပါရတယ်​ ကို Alinsett@Maung Thura ​ရေ။
အခြားတဖက်​က​တွေးပြီး​ပြောရရင်​ အခြားတစ်​​ယောက်​​ယောက်​အတွက်​ ခပ်​​ပေါ့​ပေါ့ ​ပြောဆို စရာ ​လှောင်​​ပြောင်​သ​ရော်​စရာ ရယ်​စရာဟာ ကာယကံရှင်​အတွက်​​တော့ အတိုင်းအတာတခုထိ ခံစားရတဲ့ အရာ​တွေဖြစ်​​နေတတ်​တယ်​လို့ ​တွေးမိပြန်​ပါတယ်​။
စကားမစပ်​ အတင်းစပ်​..@​နောက်​က နာမည်​ကို​တွေ့​တော့ အပြင်​မှာ သိတဲ့ သူရ ​ခေါ် နိုင်​နဲ့စတဲ့နာမည်​နဲ့သူများလားလို့ ထင်​မိတယ်​။ မှားသွားရင်​လည်း စိတ်​မရှိနဲ့​နော်​။
Alinsett@Maung Thura says: ကျနော့်နာမည်အရင်းက Thura ပါပဲ။ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်တုန်းက ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်ကြိုက်ရွေးပေးခဲ့တဲ့ နာမည်.. သူရ ပါပဲ။ အရှေ့က Maung တောင် ခေါ်ရအဆင်ပြေအောင် ထပ်တိုးထားတာဆိုပါတော့..
မှတ်ပုံတင်ထဲက နာမည်ကတော့ သူရ …
ငယ်ငယ်က အဖေ ပေးခဲ့တဲ့နာမည်က ”သန်းဇော်ဌေး”
ကျောင်းသားဘဝတလျှောက်လုံး အဲဒီ သန်းဇော်ဌေးဆ်ိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.